အစိုးရသစ်လက်ထက် ထူးခြားတဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့ ကျိုးပန်းမှုများ ~ Htet Aung Kyaw
၁. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပစ်ရပ်ဆဲရန်
၃. အစိုးရဖက်မှ RCSS/SSA နယ်မြေထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ RCSS/SSA ဖက်မှ အစိုးရနယ်မြေထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်ဖြစ်စေ လက်နက်ယူဆောင်ခြင်း မပြုရန်
၄. နေပြည်တော်အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် နေ့ရက်၊ နေရာ၊ အချိန် သတ်မှတ်ရန် -တို့ဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တို့ သဘောတူသတ်မှတ်ထားသည့် နယ်မြေ၌ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဒုတိယအဆင့်၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။
“တတိယအဆင့်ကတော့ အစိုးရကနေပြီး နေပြည်တော်မှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပေးမယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ အပစ် ရပ်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးပါတီကအမတ်တွေအားလုံးနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာအတွက် အဖြေရှာကြဖို့၊ ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးလောဝ်ဆိုင် က ဆက်ပြောပါသည်။
ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်နေရာ၌ အစိုးရဖက်မှ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင်၊ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်၊ ဦးတင်မောင်သန်းနှင့် RCSS/SSA မှ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွတ်စစ်၊“အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကော်မတီ”မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းဖက်မှ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များထံသို့
၂. နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းရန်
၃. မိမိနယ်မြေ၌ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွား နိုင်ရန် နှင့်
၄. မူးယစ်ဆေးဝါးကို ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်သွားရန် - ဟူသည့် အချက် ၄ ချက်ကို တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ပြီး မည်သည့်သဘောတူညီမှု လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ပထမအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ရန် ပြန်လည် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ဖက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့အား အကြောင်းပြန် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးလောဝ်ဆိုင်က ပြောပါသည်။
KNU ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီဝင်များ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ဆွးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ကေအဲန်ယူ ဗဟိုသစ်တောဌာနမှူး ပဒိုစောအားတိုးက “အခုသွားတာ သဘောတူညီချက် လက်မှတ် သွားထိုးဖို့ သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Informal အနေနဲ့သွားတာပဲနော်။ ဒါကြောင့် ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာ သဘောတူချက် လက်မှတ် ထိုးတာတို့ လုံးဝ မပါဘူး။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
နှစ်ဘက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွင် ကရင်ဒေသအခြေအနေနှင့် တခြားတိုင်းရင်းသား ဒေသအခြေအနေနှင့် မတူညီသော ကြောင့် အချေအတင် ဆွေးနွေးသွားရမည့်သဘောရှိသလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရရှိမှာသာလျှင် ကျန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပဒိုစောအားတိုးက ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့တို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ရှိသော်လည်း ရက်အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်း ပဒိုစောအားတိုးက ယခုလို ပြောသည်။
အလားတူ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့တွင် ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များဖြစ်သည့် သျှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်နီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့်လည်း တွေ့ ဆုံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကေအဲန်ယူသည် ၁၉၄၉ခုနှစ်မှ ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သော် လည်း အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ပေ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် တက်လာပြီးနောက် ကေအဲန်ယူနှင့် တရားဝင် တွေ့ဆုံမှုသည် ယခုအကြိမ် နှင့်ဆိုလျှင် (၂)ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူဘက်က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
မစုမြတ်မွန် တနင်္လာ, 21 နိုဝင်ဘာ 2011 (VOA)
မြန်မာအစိုးရကို နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေကြတဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေထဲက အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်မှာ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရကကမ်းလှမ်းတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်မှာ ပထမအဆင့်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုရဖို့ဖြစ်ပြီး ဒီသဘောတူညီချက်ရနိုင်ဖို့ ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပထမဆုံးလုပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးကျော်ရင်လှိုင်က ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပြပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးမှုက ဘယ်လိုလဲ၊ ဘယ်အဖွဲ့တွေက ဘာတွေသဘောတူခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ဘန်ကောက်ရုံး ရောက်နေတဲ့ မစုမြတ်မွန်က အပြည့်အစုံ အစီရင်ခံထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ပိုပြီးဖိအားပေး ပြောလာချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၊ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-South) နဲ့ ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS)၊ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) စတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့နဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင်ထဲမှာ သီးခြားစီတွေ့ဆုံစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတွေ့ဆုံကြစဉ်မှာ အချက် ၂ ချက်ကို အဓိကထား ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိူးဆောင် ဦးကျော်ရင်လှိုင်က ခုလို ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ လာတာက အဓိက အကြောင်းအချက် နှစ်ခုပေါ့လေ။ ပထမကတော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ဦးအောင်မင်းကိုယ်တိုင် သမ္မတကြီးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစားပွဲကို လာဖို့အတွက် ဖိတ်စာကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုယ်တိုင် သမ္မတကြီးကိုယ်စား လာပေး ပေးတယ်ပေါ့၊ ဒါကတစ်ချက်။
နောက်တစ်ချက်က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုတွေ့ကြမလဲ ဆိုတာ။ အဲဒီနှစ်ချက်ကိုပဲ အဓိကထားပြီးပြောပါတယ်။”
အဲဒီထဲကမှ ပထမဆုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူနိုင်ဖို့မှာလည်း အချက် ၄ ချက်ကို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နံပါတ်တစ်က ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့၊ နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ နှစ်ဘက် ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်ဖို့၊ နံပါတ်သုံးက ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ကြဖို့နဲ့ နောက်ဆုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးသွားတာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေကို လက်နက်မကိုင်ဘဲ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် ပြုရေးတွေအတွက်ကို သမ္မတကိုယ်စားလှယ်က ရှင်းပြပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
SSA တောင်ပိုင်း၊ RCSS ရှမ်းအဖွဲ့နဲ့ CNF ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးတို့ကတော့ ပြည်နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေကို လုပ်သွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
“အဓိက က ဘာလဲဆိုတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ရှင်းပြတာက ပထမ ပြည်နယ်အဆင့် စည်းဝေးပွဲကိုလာခဲ့ပါ။ အစည်းအဝေးပွဲစတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီ။ ဒါအတွက် သက်သက်ကို သဘောတူညီချက်တွေ ဘာတွေ လက်မှတ်ထိုးဖို့ကို မဟုတ်ဘူး။ အစည်းအဝေး စလိုက်တာနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီလို့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယူဆလိုက်ကြမယ်။ ပြီးတော့ တကယ်လည်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲလုပ်ဆောင်ကြမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုပါ။
အခုဟာကတော့ သဘောတူညီချက် ရတယ်ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီပထမအဆင့် အစည်းအဝေးကို လာဖို့အတွက်က ကျနော်တို့ ရှမ်းအဖွဲ့နဲ့ ချင်းအဖွဲ့ကတော့ နေ့ကော ရက်ကော သတ်မှတ်ဖို့အတွက် တော်တော်သဘောတူထားပြီ။
"ကျနော်တို့ KNU အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ဗဟိုကော်မတီကို ဆက်လက်ပြီးတော့ တင်ပြမယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လာဖြစ်နိုင်အောင် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်အောင်လို့ သူတို့ဦးတည်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားနဲ့ပဲ သူတို့ လောလောဆယ် ပြန်ထားပါတယ်။
ကယန်းအဖွဲ့ကကျတော့လည်း ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ သူတို့ နောက်ကျမှသိတဲ့အတွက် အသေအချာ မလုပ်ခဲ့ရသေးတဲ့အတွက် သူတို့ သိချင်တာတွေကိုလုပ်ဖို့နဲ့ ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကို လာတယ် စကားပြောတယ်ဆိုတာလည်း ဖြစ်အောင်တော့ လာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့က သူတို့ရဲ့ ဗဟိုကော်မတီကို ပြန်တင်ပြမယ်၊ နောက်တခါ အစည်းအဝေးလည်း ထပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောသွားတယ်။
KIO နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော်တို့က တခြား အဖွဲ့တွေ၊ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်း လုပ်ကိုင်နေတာရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့က ဒီနေရာမှာတော့ သိပ်ပြီးတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး။”
UNFC မူနဲ့သာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမည်
မင်းသုတ –November 18, 2011 by (လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ)
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များအား မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေဖြင့် UNFC
တပ်ပေါင်းစုအနေဖြင့်သာ မြန်မာအစိုးရနှင့်ဆွေးနွေလိုသည်ဟု ပြောကြားလိုက်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီဥကဌနိုင်ထောမွန်က လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ယနေ့တွင်ပြောကြားသည်။
နိုင်ထောမွန်က “မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ UNFC မူအတိုင်းပဲဆက်ပြီးရပ်တည်သွားမယ်၊ ဒီမူတွေကတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ UNFC နဲ့ပဏာမ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး တပြည်လုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အရင်လုပ်ပါ၊ အဲဒီအဆင့်ပြီးရင် နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားရမယ်” ဟု ပြောသည်။အလားတူ လွန်ခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလ(၆) ရက်နေ့တွင် ရေးမြို့၌ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပဏာမဆွေးနွေးမှုတွင်လည်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အထက်ပါ UNFC မူဖြင့်သာ အပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနိုင်မည်ကို တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မွန်ပြည်နယ်အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန်၊ ဆက်ဆံရေးရုံးထားရှိရန်၊ သတ်မှတ်နယ်မြေပြင်ပလက်နက်ကိုင်ဆောင်သွားလိုလျှင် ကြိုတင်သဘောတူညီမှုရယူရန်နှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားရန် စသည့်ချက်များဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“ဒေသတစ်ခုမှအပစ်ရပ်ထားပြီး နောက်ဒေသတစ်ခုကို ထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဒါကြောင့် UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ တဖွဲ့ချင်းခွဲပြီးအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုယူကြမှာတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တဖွဲ့ချင်းတွေ့နိုင်တယ်လို့မူချမှတ်ထားတယ်၊ အစိုးရနဲ့ KNU တွေ့ရင်လည်း UNFC ချမှတ်တဲ့မူအတိုင်းပဲ ဆွေးနွေးတင်ပြမယ်လို့သိထားရပါတယ်” ဟု နိုင်ထောမွန်က ဆက်ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ခြင်းမရှိလျှင် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု မပြုလုပ်ရန်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) အား နိုင်ငံတကာရောက် မွန်အမျိုးသား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ (OMCC)မှ ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အခြားတဘက်တွင် အစိုးရစစ်တပ်များသည် ကချင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း (SSA-S) နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အစရှိသည့် အဖွဲ့များနှင့် စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်နေသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအားဖဲ့ထုတ် စည်းရုံးခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု OMCC က ထောက်ပြထားသည်။UNFC သည် ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ၁၂ ဖွဲ့မှ အခြေခံ ၆ ဖွဲ့နှင့် မဟာမိတ် ၆ ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Monday, 21 November 2011--(http://www.kicnews.org) မှ
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် နိုင်ငံရေးများကို ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်လိုသောကြောင့် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု-မဒတ(NDF)အဖွဲ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့က နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက်မှ ၁၆ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဌမအကြိမ်မြောက် ညီလာခံအပြီးတွင် NMSP က ယင်းသို့ နှုတ်ထွက် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘ၀တူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် NDF နှင့် UNFC တပ်ပေါင်းစုနှစ်စု၏ တာဝန်ကို အဖွဲ့အ စည်းတခုအနေဖြင့် ထမ်းဆောင်ရသည်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ ထိရောက်မှု အားနည်းနေသည့် အနေအထားကြောင့် ယခုလို နှုတ်ထွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ NDF ကို အပြစ်မြင်လို့ နှုတ်ထွက်ရခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ တပ်ပေါင်းစုနှစ်စုကို လှည့် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက် သိပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး လူခွဲဝေမှုအပိုင်းမှာလည်း အရမ်းအားနည်းနေတယ်။ ဒါ ကြောင့် နိုင်ငံရေးကို တနေရာတည်းကနေ ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိအောင် လုပ်ချင်လို့ နှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်တယ်”ဟု သူက ပြော သည်။
သို့သော် NMSP အနေဖြင့် ရာသက်ပန် နှုတ်ထွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်ပါက ပြန်လည် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် သည်ဟုလည်း နိုင်ဟံသာ ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
NMSP ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အရ UNFC တွင် အဓိကလုပ်ဆောင်သွားပြီး တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုစည်းမှုဖြင့် ရည်မှန်းချက်ပန်း တိုင်ကို ဆက်လျှောက်သွားမည့်အပြင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် အမျိုးသမီးအင်အားစုများနှင့်လည်း ဆက်လက် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
တဆက်တည်းမှာပင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (NDF)ကလည်း ၎င်းတို့၏ အဌမအကြိမ်မြောက် ညီလာခံနှင့် ပတ် သက်၍ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့က ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဆက်လက် ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သွားရန်၊ စစ်မှန်၍ တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် တတိုင်းပြည်လုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးမှတဆင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို တည်ဆောက် သွားရန်တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါညီလာခံတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ နှုတ်ထွက်လိုက်ခြင်းအပေါ် ဦးခွန်အိုးက “NDF အနေနဲ့ကလည်း တိုင်းရင်းသားတပ် ပေါင်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNFC ကို စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး အစွမ်းကုန် ကူညီသွားမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒလည်း ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအပေါ် NMSP ကလည်း ဟိုဘက်မှာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သွားဖို့ နှုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းတာကို ကျနော်တို့အ နေနဲ့ကလည်း ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ပဲ လက်ခံပေးလိုက်တာပါပဲ။”ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု(NDF)ကို ၁၉၇၆ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ရက်နေ့တွင် KNU၊ NMSP၊ ALP၊ CNF၊ PPLO၊ LDU၊ PSLF၊ WNO စသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၈ဖွဲ့ဖြင့် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ၁၉၈၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ပါဝင် လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဓိက တပ်စခန်း ၄ ခု ရုပ်သိမ်းပေးရန် နေပြီတော်အား ဝမ့်ဟိုင်းတပ်ဖွဲ့ဆွေးနွေး
MAP_of_Wan_Hai_and_near ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်နှင့် အနီးဝိုက်ပြ မြေပုံ
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း ဟု လူသိများသည့် SSPP/SSA နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ရာကျေးသီးမြို့နယ်ဝမ့်ဟိုင်းဌာန ချုပ် အနီး အခြေစိုက်သည့် မြန်မာတပ်စခန်း ၄ ခုဆုတ် ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည် ဟု ပြည်တွင်းသတင်း ရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပဏာမ ဆွေးနွေးဖို့ စဝ်နော်လိတ်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဝမ့်ဟိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး နေပြည် တော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာရောက်တယ်။ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်မှာ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်နားက အဓိက ၄ နေရာမှာအခြေချတဲ့ အစိုးရတပ်တွေကို ရုပ်သိမ်း ပေးဖို့ SSPP ဖက်က တင်ပြတာကို ဦးသိန်းဇော်တို့ဘက်က အမြန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက် ပေးမယ်လို့ ကတိပေးတယ်” ဟု နီးစပ် သည့်အသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါသည်။
ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် စဝ်ကိုင်ဖ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုဖြင့် ဝမ့်ဟိုင်းဌာနချုပ်ကိုယ်စားလှယ် စဝ်နော်လိတ် ခေါ် စိုင်းထွေး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ နှင့် နေပြည်တော်အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ ဉကဌ ဦးသိန်းဇော် တို့ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက် စနေနေ့က နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ဖက်ကမူ အတည်ပြုဖြေကြားပေးခြင်းမရှိသေးဘဲ မိမိတို့ ဘာမျှမကြားသိရသေးကြောင်းသာ ပြောခွင့်ရပုဂိုလ် ဗိုလ်မှူးစိုင်းလ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောကြား ပါသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့သည် နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဌာနေပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရ ဖိအား ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၀ နှစ်လည်ပိုင်းက နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့သည်။ ဦးလွယ်မောဝ်၊ ဦးကိုင်ဖက ဌာနေပြည်သူ့ စစ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖ ဦးဆောင်သည့် တပ်မဟာ အမှတ် ၁ ဝမ့်ဟိုင်း က အသွင်ပြောင်း ခြင်း လက်မခံသော ကြောင့် ၂၀၁၁ မတ်ခ်ျ ၁၃ ရက်က စပြီး မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
SSPP/SSA ၏စစ်တမ်းအရ ဩဂတ်စ် လကုန်အထိ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲပေါင်း ၃၀၈ ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အစိုးရတပ် ၅၃၇ သေ၊ ၆၄၉ ယောက်ဒဏ်ရာ ရကာ သျှမ်းတပ်ဘက်ကမူ ၃၃ ယောက်သေ၊ ၄၄ ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်ဟုဆို၏။ အပြစ်မဲ့လူထု ဆယ်ဂဏန်း သတ်ဖြတ် ခံရကာ သုံးသောင်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်( SWAN အစီရင်ခံစာမှ) ။
အစိုးရသစ် ညှိနှိုင်းချက် မိုင်းလားနှင့်ဝ သဘောတူလက်မှတ်ထိုး
Friday, 09 September 2011 17:45 မွေခေါဝ် (သျှမ်းသံတော်ဆင့်)
အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း NDAA – ESS ၊ ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေး ပါတီ UWSP တို့ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဥကဌနှင့် တွေ့ဆုံရသည့် နေ့၌ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြု ချက်များအားနှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
“ဦးသိန်းဇော်ပြောတဲ့အချက်တွေက ကောင်းတဲ့လကခဏာတွေဘဲလေ။ ကျနော်တို့ဘက်ကလဲ ဘာမှဆုံးရှုံးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဝ ဘက်ကလဲ လက်မှတ်ထိုးတယ်။ ကျနော်တို့လဲ အစိုးရဖက်က ညှိနှိုင်းချက် ဟာ ဝ နဲ့တူရင် လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ သဘောတူထားပြီးတား” ဟုမိုင်းလားအရာ ရှိတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
UWSP မှ လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ် (photo: myanmar.com)
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဥကဌ ဦးသိန်းဇော်မှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် အချက် ၄ ချက်မှာ-
၂. နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးရုံးများ နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
၃. အစိုးရဖက်မှ မိုင်းလားနယ်မြေထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မိုင်းလားဖက်မှ အစိုးရနယ်မြေထဲသို့ ဝင်ရောက် သည်ဖြစ်စေ လက်နက်ယူဆောင်လာပါက ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီး ဝင်ခွင့်ပြုမှ ဝင်ရောက်ခြင်း။
၄. မိမိနယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နေပြည်တော်သို့ အကြောင်းကြား၍ ပူးတွဲကော်မတီ ဖွဲ့ကာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း - တို့ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဥကဌ ဦးသိန်းဇော်၊ ပြည်ခိုင်းဖြိုးပါတီ အထွေ ထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်း တို့ ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP မှကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် စက်တင်ဘာ ၆ ရက်၌လည်းကောင်း၊ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့၌ လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
NDAA မှ လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ် (photo: myanmar.com)NDAA မှ လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ် (photo: myanmar.com)
စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်မူ အစိုးရဖက်မှ သျှမ်းပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် သျှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သူ၊ သျှမ်းပြည်နယ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးမောင်မောင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ထွန်းမြင့်၊ သျှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မြင့် တို့တက် ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆို၏။
“အရင်တုန်းက ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့၊ ပြည်သူ့စစ်တို့ လုပ်ခိုင်းတယ်။ လက်နက်မချရင် မတရားအ သင်းဖြစ်သွားမယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အခုတော့ ၁၉၈၉ ငြိမ်းချမ်းရေး စယူတုန်းကလို ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကို ဦးသိန်းဇော် က နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြည်သူ့စစ် ပြောင်းခိုင်းတာ စစ်တပ်က လုပ်သွားတာ။ အခု ပြည် သူလူထုက တင်မြောက်ထားတဲ့ အစိုးရသစ်ကနေ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ ဖြေတယ်ဗျ” ဟု ၄င်းကဆက်လက်ပြောပါသည်။
ယမန်နေ့ သြဂတ်စ် ၈ ရက် မိုင်းလား၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးသည် ဗဟိုကော်မတီအတွင်းပြန်လည်ရှင်းပြ သည့် အစည်းအဝေးတစ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။သြဂတ်စ် ၁၈ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ကြေငြာချက်ကြောင့်နေပြည် တော်သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစစဆွေးနွေးရန် သြဂတ်စ် ၂၇ ရက်၌ စာရေးအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် မဆွေးနွေးရဘဲ နေပြည်တော်မှ တိုင်းရင်းသားရေးရာနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ဖော် ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဥကဌ ဦးသိန်းဇော်နှင့် ချက်ချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆို၏။
ဒေါ်စုရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့်အပေါ် KIA ကေအိုင်အေက စောင့်ကြည့် ဦးမယ် လို့ဆို
နိုဝင်ဘာ ၂၀။ (BBC)
အန်အယ်ဒီ ပါတီ ကို ပြန် မှတ်ပုံ တင်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ရွေးကောက် ပွဲ ဝင်မှာ ကို ကေအိုင်အို ကချင် လွတ်မြောက် ရေး အဖွဲ့က လတ်တလော မှတ်ချက် ပေးမှာ မဟုတ်ဘဲ စောင့်ကြည့် သွားမှာသာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်လာ တဲ့ အခါ ဒေသတွင်းနဲ့ မြန်မာ ပြည်တွင်း မှာ ဘယ်လောက် အကောင်းဖက် ဦးတည်လဲ ဆိုတာကို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အားလုံးကလည်း စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ ကေအိုင်အို ပြောခွင့်သူ ဦးလနန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကို လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကိစ္စ ဖြေရှင်းနိုင်မှ ရလိမ့်မယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
အန်အယ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ မယ်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ ပံ့ပိုး မှုနဲ့ ထောက်ခံမှုတွေ လုပ်လို့မရတော့ ဘူးလို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ အကောင်းဘက်ကို သွားဖို့ အာဆီယံ၊ ဥရောပသမဂနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့အပါ အဝင် နိုင်ငံတကာက လမ်းကြောင်း တွန်းအားပေး တာမျိုးတွေ လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ကေအိုင်အို ပြောခွင့်ရသူ ဦးလနန်းက ဘီဘီစီကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အပစ်အခက်ရပ်စဲရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မကဒတ သဘောထား
ယနေ့ကာလ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မကဒတ ၏ သဘောထား
ယနေ့ကာလ စစ်အုပ်စု၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုများသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးကို ဦးတည်သော ကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်ဟု ရှုမြင်သည်။
၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော စစ်ရေးအကြပ်အတည်းများကို ကျော်လွှားနိုင်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအတွင်း ဖဲ့ထုတ် စည်းရုံးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေမှုများသာ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် -
- တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဆောင်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ထုတ်ပြန်ရမည်။
- နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားရန် တိကျသောအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါရှိရမည်။
အထူးသဖြင့် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံရေးအရ ပါဝင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်သည်။
ရက်စွဲ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်။